Tsy milamina… | NewsMada
Tsy milamina amin’ny ankapobeny ny firenena. Manomboka any amin’ny andavanandron’ny mponina izany. Eo ny fitaintainana ao an-trano, eny an-dalana, amin’ny atao rehetra noho ny tsy filaminana sy tsy fandriampahalemana. Tsy milamina intsony satria ireo mba antenaina fa hiaro ny vahoaka sy ny fananany mihitsy no efa miray tendro na koa mivadika jiolahy. Voaporofo hatrany izany amin’ireny mpitandro filaminana voarohirohy amin’ny asan-jiolahy ireny tato ho ato. Tsy milamina ny mpanjifa sy ny mpivarotra, amin’ity resaka henan-kisoa miteraka resabe noho ny tsindrona fanabeazana aizana atao amin’ny kisoa ity. Mahazo vahana ny tsy fanekena ny fidiran’ny Sinoa any amin’ny tanàna sasany any. Soamahamanina, Ambohidehilahy, Manakara, Alaotra… Tsy mampilamina ny mponina avokoa izany. Nametraka ahiahy sahady koa ireo mpiadina ny fanadinana hidirana ho mpiasan’ny ladoany amin’ny fitsarana ny laza adina. Miahiahy sy tsy milamin-tsaina… amin’ny fanahiana kolikoly.
Tsy tokony hampilamin-tsaina ny mpitondra koa raha tena mpitondra izy ireo ny tsy faharisihan’ny vahoaka midina an-dalambe. Na koa hihevitra fa afaka hiaro hatramin’ny farany ny fahefany ireo mpitandro filaminana. Tsy midika fa mbola tia sy miandany aminao akory ny tsy fahatongavan’ny olona eny.
Tahaka izany koa ny mpanohitra. Tokony hampieritreritra azy ireo ny tsy maha taitra ny olona ho eny an-kianja intsony, ka tsy tokony hialokaloka fa maro loatra ireo mpitandro filaminana na koa hoe teo ny sakana samihafa. Midika ireo fa tsy milamina ny fitondrana eto ary tsy marin-toerana koa ny fanoherana.
Ankoatra ireo, misy tsy milamina na koa tsy mirindra sy tsy manana fahasahiana ny tompon’andraikitra matoa tsy mbola sarona ihany ireo trondro vaventy eo amin’ny fanaovana kolikoly, mahazo vahana eto amin’ny firenena. Tsy vitan’ny resabe na fanaovana angoatenda fotsiny izany na koa ilazana fa efa mandeha ny famotorana sy fanadihadiana fa tokony ho hita taratra amin’ny asa mivaingana… Mba tsy ho very anjavony na ho maty momoka ny ady samihafa atao eto amin’ny firenena. Mba hampilamina ny vahoaka sy ny firenena…